एमालेकाे दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट,कुन जिल्लामा काे काे ? – ekarnalikhabar
एमालेकाे दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट,कुन जिल्लामा काे काे ?
२७ कार्तिक २०७८, शनिबार १६:१३
नेकपा एमालेले आगामी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिरहेको छ । करिब ८ लाख पार्टी सदस्यहरुबाट १९९९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने जनाएको सो पार्टीले शनिबार दिउँसोसम्म १२ वटा जिल्लाका प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएको जनाएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि सहमतिमार्फत नै प्रतिनिधि छनोटको क्रम जारी रहेको एमालेले जनाएको छ ।
नेकपा एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सुर्य थापाकाअनुसार शनिबार दिउँसोसम्म १४ जिल्ला र एक प्रदेश कमिटीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भैसकेका छन् । ‘नतिजा आउने क्रम जारी छ र आम रुपमा सबैतिर सर्वसम्मतको स्थिति छ । अहिलेसम्म कुनैपनि जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रियामा गएको जानकारी प्राप्त भएको छैन’, थापाको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म जिल्लागत निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू
खुल्ला: नगेन्द्र शाहि, रमेश शाही , राजेन्द्र थापा, भरतराज धिताल , विरेन्द वाेगर्टि , युवा नेता वकिल बम,
दलित: नरपति सुनार, कर्णजित विक, व्यासि तिरूवा
महिला: दक्षिणा शाही , तारा शाही , पार्वती सिंह (संज्याल) दलित महिला: गाेमा नेपाली रहेका छन ।
७. गण्डकी प्रदेश कमिटी
अन्य जिल्लाकाे अधिवेशन हुन बाँकी रहेका छन् ।